★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်မတွေကို ဘယ်လို ထိမ်းရမလဲ?
လူရမ်းကားဝါဒီ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ကိုယ်ပိုင်မူလုံးဝ မရှိပါဘူး။ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ၊ Pagan တွေရဲ့ မျိုးစေ့တွေပေါင်းပြီးမှ ဖြစ်လာတဲ့ လူရမ်းကားဝါဒတစ်ခုပါ။ အဖေတွေများလွန်းလို့ ဖာသည်မဖင်ထဲက ထွက်တဲ့ ကလေးနဲ့ နှိုင်းတာ မရိုင်းပါဘူး။ မျောက်တူ ဆိတ်တူ ပလီဆရာတွေဟာ မြန်မာမလေးတွေကို (မြန်မာဆိုတာ ရခိုင်၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ဗမာ၊ ကယား တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါတယ်) မိန်းမပျက်တွေဖြစ်ကြောင်း စာတွေဖြန့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာလည်း အဖြူမလေးတွေကို မိန်းမပျက်တွေဖြစ်ကြောင်း မျောက်တူ ဆိတ်တူ ပလီဆရာတွေ ပြောတာ သတိထားမိမှာပါ။ ကုလားမတွေနဲ့ ကုလားတွေ. . . မင်းတို့ ပလီဆရာတွေ တခြားလူမျိုးမိန်းခလေးတွေကို မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေလို့ပြောတဲ့ကိစ္စကို မှန်တယ်လို့ ထင်သလား? တကယ်တမ်းတော့ မွတ်ဆလင်မတွေသာ မိန်းမပျက်တွေဖြစ်ကြောင်း ကျနော်တို့က ဆောင်းပါးမှာ သက်သေပြဖူးပါတယ်။
အနုပညာရှင်ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျက်စီးတဲ့သူတွေပါပဲ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ NO က သဇင်ဟာ ရွတယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါကတော့ လူဆိုတော့ တခါတလေမှားယွင်းတာ ရှိတတ်သလို နာမည်ကြီးလိုတဲ့ စိတ်ကြောင့်လဲအမှားလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါတောင် မမြင်ကွယ်ရာမှာပဲဖြစ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံက အဆိုတော်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က အဆိုတော်တွေဟာ အများကြီး ယဉ်ကျေးပါသေးတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားမတွေဟာ မွေးပြီးမကြာခင်မှာ သူတို့ရဲ့ ဇတ်အင်္ဂါတွေကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် ဓါးနဲ့အလှီးခံရတဲ့သူ တွေဖြစ်ပါတယ်။ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ သူတို့ မိန်းမပစ္စည်းဓါတ်ပုံကို ကြည့်ချင်ရင် မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၁) ဆောင်းပါးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သတိထားဖို့က ထမင်းမစားခင် မကြည့်ပါနဲ့။ ကုလားမပစ္စည်းက ရွံစရာ ကောင်းလွန်းတော့ ထမင်းမစားနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ မွတ်ဆလင်မတွေ သူတို့ ဇတ်အင်္ဂါကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် လုပ်ခါနီးမှာ ဘယ်လိုကြောက်ရွံ့နေလဲသိလိုရင် Photo essay လေးကို ကြည့်စေလိုပါတယ်။
ကဲကဲ.. ဆက်မယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အဆိုတော်ဟာ လူလယ်ခေါင်မှာ ဘယ်လို အသုံးတော်ခံလဲဆိုတာ ဗီဒီယိုနဲ့ ပြလိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဆိုတာယနေ့အချိန်အထိ မွတ်ဆလင်ဘာသာအတွက် ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဟိန္ဒူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နေတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ရိုသေတဲ့ နိုင်ငံလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် မှန်ကန်ပါတယ်။ အဲလိုပြောတော့ အင်ဒိုနီးရှားမတွေကို မိန်းမကောင်းတွေလို့ ယူဆဟန်ရှိပါတယ်။ အဲလိုထင်နေတဲ့သူတွေဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို မလေ့လာဖူးတဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ပါ။ မွတ်ဆလင်ကို ရိုသေလေလေ၊ တဏှာရူးကြီးဖြစ်လေလေပါပဲ။ မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင် မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်ပဲ ဥပမာကြည့်ပါ။
မွတ်ဆလင်ဆိုတာ သူများဘာသာကိုပဲ စောက်တင်းပြောပြီး သူတို့ ဘာသာကျတော့ ဘယ်တုံးကမှ ပြန်လည်စမ်းစစ်တာ မရှိသလို၊ တခြားဘာသာဝင်တွေက ဝေဖန်ရင် လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ သူတို့ဘာသာကို စော်ကားတယ်၊ သူတို့ကို မုံန်းတီးလို့ပြောတယ် စသဖြင့် .. စသဖြင့် စိတ်ကောက်ကြပါတယ်။ ပြီးရင် အကြမ်းဖက်ပါတယ်။
ကဲ. . . ပထမဆုံးကြည့်စေချင်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ အဆိုတော Akhir Zaman ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ ဗီဒီယိုစကတည်းက လေးဘက်ထောက်ပြီး ခွေးမကြီးလို ဖင်ကို လှုပ်နေတာ ရွံစရာကြီးပဲ။ သူကတော့ အဟုတ်ကြီးထင်နေမှာပါ။ ကျနော်တို့ကတော့ ထမင်း တစ်နပ် မစားဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ပိန်လိုတဲ့ သူတွေ ဒီဗီယိုကို များများကြည့်ပေးပါ။
ဒီဗီဒီယိုကတော့ မွတ်ဆလင်မတွေ အရမ်းဂုဏ်ယူထိုက်ပါတယ်။ bikini ၀တ်ပြီး စင်ပေါ်မှာ သီချင်းတက်ဆိုရဲတဲ့ သတ္တိုဟာ မြန်မာအဆိုတော်တွေမှာ မရှိဘူး။ တကယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က ဖာသည်မတောင် မိုဟာမက်တပည့်မတွေလောက် အရှက်မနည်းပါဘူး။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စင်ပေါ်ကို ကုလားတွေက တက်ပြီး ပိုက်ဆံပေးတယ်။ လူတကာ ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး သီချင်းဆိုလိုက်၊ ဖင်ကို အရိုက်ခံလိုက်နဲ့ သိပ်ကို ကျေနပ်နေပါတယ်။ မိုဟာမက်တပည့်တွေ လုပ်ကိုင်နေပုံကြည့်လိုက်ပါဦး။ နှာဘူးကတော့ မိုဟာမက်ထက် မသာပေမယ့် သိပ်တော့ ကွားခြားတယ် မထင်ပါဘူး။ ကလေးငယ်လေးကအစ တက်ပြီး တဏှာရူးနေတယ်။
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ မိုဟာမက်ကို အားကျတဲ့ မွတ်ဆလင်မထင်ပါတယ်။ စကတည်းက အသက်မပြည့်တဲ့ ကလေးကို စင်ပေါ်ခေါ်ပြီး လူပုံရှေ့မှာ ဖင်လှုပ်နှာဘူးထပြတယ်။ ကနေဒါနဲ့ အမေရိကမှာဆိုရင် ကလေးကို မဟုတ်တာ လုပ်တယ်ဆိုပြီး မွတ်ဆလင်မ jail အောင်းရမှာ သေခြာတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်တွေကိုလဲ စင်ပေါ်မှာ ဖာသည်မ တစ်ယောက်လိုပြုမူပါတယ်။
ဒီတစ်ကောင်ကတော့ သိပ်ကို တော်ပါတယ်။ စင်ပေါ်တက်လာတဲ့ ကောင်နဲ့ လိမ်ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံလုပ်ပေးပါတယ်။ အသံကလဲ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကုလားကလဲ ပါးစပ်ကြီးထဲ ယင်ကောင် ၀င်သွားရင်တောင် သိမယ် မထင်ဘူး။ ပြုံးဖြဲနေတာပဲ။ ဟိုကလဲ တခါ "အား" လို့ အော်လိုက် လက်ထဲက ပိုက်ဆံ တစ်ရွက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်နဲ့။ ဟားဟား မွတ်ဆလင်မတွေကတော့ တကယ်ကို လုပ်စားတတ်တယ်။
အဲဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်တော့ ကျနော်တို့ ဘာတွေ သိလာလဲ? မွတ်ဆလင်တွေဟာ ကာမစိတ်ကို အင်မတန် ထိမ်းတယ်ဆိုပြီး အထင်ကြိးအောင် လိမ်ထားပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင် အမြင်မခံလိုတဲ့အတွက် ကြောင့် Hijab ၀တ်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကောင်း ယူပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အနောက်ဖက်နဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကို လိမ်ညာ ချက်သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ယောကျားနဲ့ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ သမီးအရင်းတောင် မုဒိမ်းပြန်ကျင့်တာပဲ မဟုတ်ပါလား? ကုလားတွေကို မိန်းမတွေအများကြီး ယူခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ ပျော်ပါးတာ လျော့သွားမယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြထားပါတယ်။ အခုဗီဒီယိုသက်သေတွေအရ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ အင်မတန်ကို ရွနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ အရမ်းရွနေတာ ယောကျား တစ်ယောက်ပဲ ယူထားလို့ဆိုတာ လက်ခံရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ယောကျားတွေကို ငြိမ်အောင် မိန်းမ လေးယောက်ယူခွင့်ပေးရင် မိန်းမတွေကိုရော ယောကျားလေးယောက် ယူခွင့်မပေးသင့်ဘူးလား? ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ ကျုပ်တို့ မြန်မာမလေးတွေနဲ့ အဖြူမလေးတွေကို ဆိတ်တူ မျောက်တူပလီဆရာတွေက စော်ကားတာကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ကုလားတွေ ဘာပြောချင်လဲ?
အခုဆောင်းပါးဟာ မွတ်ဆလင်တွေကို ဒေါသထွက်ဖို့ ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက် ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးရင် အချိန်အ၇မ်းပေးရပါတယ်။ ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတာ မြန်မာအများစုဟာ ကျနော်တို့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ပြီး မွတ်ဆလင်တွေကို နှိပ်ကွက်တာကြည့် ၀မ်းသာပိတိတွေဖြစ်နေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးမှာ မကူညီပါဘူး။
ကဲ.. ခင်ဗျား က အခုဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပိတိတွေနဲ့ပဲ တင်းတိမ်နေတော့မှလား? ပိတိလေးတစ်ခုအတွက်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘလော့က ဆောင်းပါးကို လာမဖတ်နဲ့။ ကျနော်တို့က လူဖတ်များတာကို အလေးထားတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်တဲ့သူတွေ များလာဖို့ပဲ အလေးထားပါတယ်။ ခင်ဗျား ဟာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် ဆီပုံးတွေမှာ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အရှိန်မပျက်အောင် ရေးသားပါ။ ကိုဟာဂျီဝက်ဆီဘလော့နဲ့ ကျနော်တို့ ဘလော့ကို လူသိအောင် ကူညီပေးပါ။ ဆန့်ကျင်သူတွေများလာအောင်လည်း စည်းရုံးပေးပါ။ ပိတိကိုမစားပါနဲ့တော့.. လက်တွေ့ပဲ လုပ်ပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:27 AM
ဘာသီချင်းတွေ ဆိုနေတာလဲ၊သီချင်းစာသားလေးတွေ သိရင် ဖေါ်ပြပေးပါဦး၊ မြန်မာပြည်က ဖာသည်တောင် ဒီကောင်မတွေထက် အရှက်ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မွတ်စလင် အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်တယ်၊ အားပေးတယ်၊
ကျွန်တော်မှာဒီခွေးမသားတွေလူမဆန်တဲ့ .....လင့်တခုရှိပါတယ်....အဲဒီလင့်နဲုဒီဆိုက်ပိုင်ရှင်အကို့ 
ကိုတတပ်တအားကူညီချင်ပါတယ်ဗျာ....ဘယ်လို ပို့ ပေးရမလည်းပြောပြပါခင်ဗျား
ဘော်ဒါတို့ မလေးရှားမှာဖွင့်ထားတဲ့ဇေယျာ မြန်မာစတိုး
အဲဒီကောင်တွေမြန်မာမတွေကိုဖျက်စီးပြီး online တင်တာမနဲတော့ဘူး။